तिहारको ऐतिहासिक महत्व र भाइटीका – Sourya Online
तिहारको ऐतिहासिक महत्व र भाइटीका
तुलसा दुलाल २०७७ कार्तिक ३० गते ९:२२ मा प्रकाशित
तिहार असुरहरूका राजा बलीलाई आफ्नो हराएको राज्यमा स्वागत गर्ने र धनकी देवी लक्ष्मीलाई स्वागत गर्ने उत्सवका रुपमा मनाइन्छ । देव र असुरहरू बिचको वर्षौवर्षको तिक्ततालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लक्ष्मीले हातमा राखी बाँधिदिएर बलीलाई भाइ बनाएकी थिइन् जुन सम्बन्ध कार्तिक महिनामा पर्ने औँसीको वरिपरी आएर टुङ्गिएको थियो । जसको सम्झना स्वरुपको चाड नै तिहार हो । महालक्ष्मीले राजा बलीलाई श्रावणपूर्णिमाको दिन हातमा ताविज वा राखी बाँधिदिएर भाइ बनाइन् र उपहारमा बली राजाको ढोकामा बसेको मान्छेलाई देखाउँदै त्यो मान्छेलाई छाडिदिन आग्रह गरिन् ।
लक्ष्मीले बलीसँग रक्षाबन्धनको अनुष्ठान गरेर विष्णुलाई वरदानको रूपमा मागेर बलीको बन्धनबाट मुक्त गराइन् । बलीले विष्णुलाई आफ्नो स्वामित्वको सबैथोक प्रदान गरेर भक्ति देखाए । यसको बदलामा विष्णुले भने कि प्रत्येक वर्ष पाँच दिनको अवधिमा बलीले स्वर्ग, पृथ्वी र भूमिगत सबै तीन राज्यमा शासन गर्न सक्दछन् । यस दिनमा, यम, जो नरकको राजा र मृत्युको देवता हुन्, आफ्नो राज्यलाई छोडेर आफ्नी बहिनी यमुनालाई भेट्न आउँछन् ।
जब बली र यमराज पृथ्वीलोकमा आए त्यसपछि चारैतिर रमाइलो, गाना बजाना, रंगिबिरंगी फुलहरू, पटाकाहरू देखिन्थ्यो । त्यो रमाइलो हेर्न लक्ष्मी पनि सुटुक्क आएकी थिइन् । यो विश्वास गरिन्छ कि, मृत्युका देवता यमराज आफ्नी बहिनी यमुनाको घरमा आएर त्यहाँ पाँच दिनसम्म बसे । त्यसैले तिहारलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ । उनी बहिनीको आतिथ्यमा निकै खुसी भए ।
त्यसैले उनले बहिनीलाई आफ्नो इच्छा जे छ माग्न भने । यमुना चाहन्थिन् कि हरेक वर्ष एकैदिन भेला हुने भाइबहिनीहरूको प्रेम र विश्वास बलियो रहोस् र भाइहरूले लामो जीवन र प्रख्यातता प्राप्त गरुन् । यमराजले बहिनीको इच्छालाई अनुमति दिए । सोही दिनलाई यमपञ्चक र दिदीबहिनी, दाजुभाइको पुनर्मिलन भएको दिन ‘भाइटीका’ भनिन्छ । पौराणिक कथानुसार, बलीले लक्ष्मीको पूजा जसरी एक भाइले आफ्नी बहिनीको पूजा गर्दछन्, त्यस्तै बली र उनकी श्रीमती देवीप्रति समर्पित थिए । वास्तवमा, उनले आफ्नो भक्तिमार्फत देवीलाई सदाको लागि आफ्नो ठाउँमा बस्न राजी गरे । यो बलद्वारा कैद थिएन केबल प्रेम र भक्तिद्धारा थियो । जुन कुरा विष्णुलाई मनपरेन र बलीको सतकर्तो यज्ञमा वामन अवतार लिएर विष्णुले दानव राजा बलीबाट तीन संसार हात पारे । त्यसपछि विष्णुको अवतार वामनले बलीलाई उनको स्वर्गीय राज्यबाट नर्कमा पठाए ।
राजा बली आफ्नो दरबारमा आउने जोकोहीलाई दान वा भीख माग्दा दिने गर्दर्थे जसका कारण उनी निकै लोकप्रिय थिए । वामनदेवले बली राजासँग केवल तीन पाइला जमिन मागे । वामन को हो भनेर थाहा नपाइ बलीराज उनको माग पूरा गर्न सहमत भए । बली राजाको ठूलो अचम्मको कुरा, वामनदेवले उनका दुई चरणहरू पृथ्वी र ब्रह्माण्ड नै ढाक्यो तेस्रो चरण उनको शिरमा राख्दा बली सुतलमा पुग्यो । बली त्यहाँ पनि राजा तर भूतहरूका हुनेछ ।त्यसपछि उनले विष्णुलाई आफ्नो दरबारमा बस्न अनुरोध गरे । विष्णुले आफ्नो इच्छा प्रदान गरे । विष्णु, सबै देवताहरूमध्ये सबैभन्दा महान् भएकाले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्यो । विष्णुले आफ्नो नयाँ राज्यमा आफ्नो स्थानको अभिभावक देवताको रूपमा रहने प्रतिज्ञा गरे तर लक्ष्मी उनको घर फर्किनुपर्ने थियो । तर लक्ष्मीलाई बलीसँगको नयाँ मित्रता मनपरेन । लक्ष्मीले आफूलाई ब्राह्मण महिलाको भेषमा बदली गर्छिन् र आफ्नो पति नफर्कुञ्जेल सुरक्षा लिन बलीको घरमा गएर शरण माग्छिन् । स्वभावैले दयालु, बलीले उनलाई आफ्नो दरबारमा स्वागत गरे ।
उनी ब्राह्मण महिलाको रूपमा आफ्नो प्रेम फिर्ता ल्याउने प्रयासमा पृथ्वीमा उत्रिएकी थिइन् । उनले बलीलाई बताइन् कि उनका पति लामो कामको लागि गएका छन् र उनलाई बस्नको लागि ठाउँ चाहिएको छ । राजा बलीले उनको पूर्ण हृदयले स्वागत गरे र आफ्नै बहिनीको रूपमा सुरक्षित गरे । ब्राह्मण महिलाको आगमनदेखि अर्थात् देवी आफै बलीको सम्पूर्ण घर अचानक खुसी, धन, र फसलको साथ खेलिरहेका थिए ।
महिनामा पूर्णिमाको दिन लक्ष्मीले बलीको नाडीमा रंगीन सूतीको धागो बाँधेर सुरक्षा र सुखको लागि प्रार्थना गरिन् । उनको निष्ठाबाट प्रभावित भएर बलीले उनलाई केही सोध्ने इच्छा प्रदान गरे । तुरुन्तै, लक्ष्मीले द्वारपाललाई देखाउँदै बलीलाई आफ्नो पतिलाई फर्काउन अनुरोध गरिन् । अलमल्लमा परेर बलीले सोधे कि केवल अभिभावक वा वामन कसरी यस्तो सद्गुणी महिलाको पति हुन सक्छन् ! त्यसबेला दुवै विष्णु र लक्ष्मीले उनीहरूको वास्तविक पहिचान प्रकट गरे । बली एक सद्गुण व्यक्तित्व र एक सुरक्षात्मक भाइ भएको कारण उनले भगवान्सँगै देवी बैकुण्ठतिर जान अनुरोध गरे । तर आफ्नो वाचा पूरा गर्न, हरेक वर्ष, प्रभु लगभग चार महिनाको लागि आषाढ महिनाको हरिसयनी एकादसीदेखि मंसिर महिनाको हरिबोधनी एकादसीसम्म सधै आउने वचन दिए ।
त्यसपछि विष्णु बली राजादेखि खुसी भएर बलीलाई पाँच दिनसम्म तीन संसारमा शासन गर्ने वरदान दिए । विष्णुले उनलाई बली राजाको चार महिना रक्षा गर्ने कुरामा सहमत हुनुका साथै तीन दिनसम्म तीनवटा हिन्दू संसारमा शासन गर्ने अनुमति दिए । जब बली पृथ्वीलोकमा आउँदा चारैतिर रमाइलो, गाना बजाना, रंगिबिरंगी फुलहरू, पटाकाहरू, जताततै मदिरापान र जुवातास खेलहरू भएको देखिन्थ्यो । त्यो रमाइलो हेर्न लक्ष्मी पनि सुटुक्क आएकी थिइन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ । त्यो रात वर्षकै अँध्यारो रात औँसी परेको थियो । देवी आएको थाहा पाएर पृथ्वीवासीले झिलिमिली बत्ती बालिदिए । जसलाई दीपावली वा गाइतिहारे औँसी पनि भनिन्छ ।
बलीको भाइ यमराजको विश्व तीन संसारमध्ये एक हो । त्यसकारण ऊ आफ्नी बहिनीलाई भेट्न गए, किनकि उनी लामो समयदेखि बहिनीलाई भेट्न आएका थिएनन् । यमराज बहिनी यमुना देखेर यति खुसी भएकी यति लामो समयपछि भ्रमण गरिसकेका दाजुलाई कसरी स्वागत गर्ने उनलाई थाहा थिएन । उनले यमराजलाई पाँच दिनको लागि खुसी राख्न हरसम्भव कार्य गरिन् । अन्तिम दिनमा, आफ्नो संसारमा फर्कनुभन्दा पहिले, यमराजले आफ्नी बहिनीलाई उनको अतिथि सत्कारको बदलामा अनौठो उपहारको प्रस्तुतिकरण गरे । हामी विश्वास गर्छौं कि उनले ‘भाई पूजा’ को परम्परा स्थापित गरिसकेका थिए ।
तिहार बलीलाई आफ्नो हराएको राज्यमा स्वागत गर्ने उत्सव हो । दन्त्यकथा यो छ कि बलीलाई रातभरी पृथ्वीको यात्रा गर्न असम्भव थियो त्यसैले उनले आफ्ना मानिसलाई तिनीहरूको अवस्थाको आँकलन गर्न स्वयंसेवाको लागि अनुरोध गरे । ती स्वयंसेवकको व्यक्तिको खुसी जाँच पूरा गर्नुपर्ने दायित्व थियो । यसबाहेक, स्वयंसेवकको अतिरिक्त काम भनेको भगवानको सन्देश फैलाउनु थियो । अर्थात् सबैलाई ईश्वरीय ज्योति पठाउनु, जेसुकै गरे पनि घरघरमा गएर स्वयंसेवकले चन्दाको महत्व पनि वर्णन गर्थे र आफैलाई मर्यादित ढंगले प्रस्तुत गर्थे । त्यहीबेलादेखि अहिले पनि वयस्क र बालबच्चाले आफूलाई बलीको स्वयंसेवक भनेर घोषणा गर्दै घरघर देउँसीभैलो गाउँदै हिँड्छन् । उनीहरुले ‘हामी बली राजाले पठाएर आएका हौँ,’ भन्दै देउँसीभैलो गाउँछन् । यस सन्दर्भमा उनीहरुले फलफूल, नगद, रोटी वा खेतको कुनै पनि उत्पादनको उपहार संकलन गर्दा मानिसको खुसीको सूचक र राम्रो नराम्रो पक्षको समेत जानकारी लिन सक्नछन् । तिहारमा सन्देश फैलाउन र मानिसको खुसीलाई बुझाउन धेरै गीतहरूमध्ये, त्यहाँ बाँकी दुई भैलो र देउँसी बढी उल्लेखनीय छन् ।
‘भैलो’ भनेको घरघरमा जाने महिलाको अभ्यास हो, जसले घर सफा गर्न सल्लाह दिइरहेको हुन्छ र आउँदो वर्षको लागि घरका मानिसरूको राम्रो स्वास्थ्य र समृद्धिलाई सुझाव दिइन्छ । भैलोका कलाकारलाई भैलिनीहरू भनिन्छ । परम्परागत रूपमा भैलो (लक्ष्मी पूजा) को तेस्रो दिनमा मनाइन्छ र यो घरको मालिकले भैलिनेहरूलाई दिने उपहार दान हो जुन भीख माग्नेभन्दा फरक छ । यो विन्दु गीतमा बनेको छ । यहाँ भैलिनीहरू आँगनमा आउँछन्, झाडु लिएर र घर सफा गर्नुहोस् भन्छन् र आफै पनि सरिक हुन्छन् । घर मालिकलाई सूचित गरिसकेपछि, भैलिनीहरूले पटकथाको गीत गाउँछन् ।
देउँसी र भैलो गीतहरूले संकेत गर्दछ कि यो परम्परा राजा महाबलीसँग सम्बन्धित छ । गीतका बोलहरू ‘हामीलाई राजा बलीले पठाएर आएको,’ गीतमा देउसरे वा देउसुरे दुई शब्द ‘देव’ र ‘असुर’ को संयोजन हो । राजा महाबलीसँग मिश्रित देव र असुर वंश थियो । उनी असुर राजा हिरण्यकशिपुका पनाति, प्रह्लादका नाति र विरोचनाका छोरा थिए । साथै गीतमा प्रयोग भएको ‘देउसेयर’ शब्द ‘देउसे’ लाई ‘देउ’ भनेर बुझ्न सकिन्छ, जसको अर्थ नेपालीमा ‘दिनुहोस्’, र ‘साइर’ संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ ‘टाउको’ हुन्छ । त्यसोभए अव्यवस्थित यो कुन भाषा हो ? यसको अर्थ आफ्नो टाउको प्रस्ताव गर्नु वा अर्को शब्दमा आफूलाई बलिदान दिनु पनि हो ।
पुराण अनुसार राजा बलीले आफ्नो टाउको विष्णुको पाँचौं अवतार वामनलाई दिए । राजा बलीले अश्वमेघ यज्ञ गरिरहेका थिए, जब वामन बलीको नजिक पुगे र तीन पाइला बराबरको भूमि मागे । बली आफ्नो दरबारमा आउने जोकोहीलाई मागेको दिने व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्थे । बली आफ्नो माग पूरा गर्न सहमत भए । बलीको ठूलो आश्चर्यको कुरा, वामनले पृथ्वी र ब्रह्माण्डलाई दुई चरणमा कभर गरे, त्यसपछि उनले तेस्रो चरण कहाँ राख्ने भनेर सोधे । बलीले आफ्नै टाउको चढाए । विष्णुले बलीको भक्ति देखेर उनलाई आशिष दिए र उनलाई स्वर्गबाट सुतलामा पु¥याए । आफ्नो बलिदानको लागि, बलीले विष्णुको अनुग्रह प्राप्त गरे । तिहारको रूपमा चिनिने प्रकाशमय दिवसीय बत्तीहरूको उत्सव, मृत्युको देवता यमको सम्मान गर्दछन्, यसै बीचमा, धनको देवी लक्ष्मीको पूजाले उत्सवहरूमा प्रभुत्व जमाउँछ ।
पहिलो दिन कागतिहार अर्थात् कागको दिन हो । यमको जानकारीकर्ताको रुपमा यसलाई पूजा गरिन्छ । कागतिहारको उत्सव तिहारको पहिलो दिन हो । हिन्दूहरू कागलाई मृत्युका देवता यमराजको दूत ठान्छन् । मानिस घरमा राम्रो भाग्य ल्याउनको लागि यसको पूजा गर्छन् । दोस्रो दिन, कुकुरतिहार यमका दूतको रूपमा कुकुरको पूजा गरिन्छ । हिन्दू पौराणिक कथामा कुकुर महत्वपूर्ण पशु हो । भनिन्छ कि भैरव, भगवान शिवको अवतार, एक वाहन (वाहन) को रूपमा कुकुर थियो । यो पनि विश्वास गरिन्छ कि मृत्युको देवता, यमका दुई रक्षक कुकुर थिए । प्रत्येकका चार आँखा थिए । कुकुरले नरकका ढोकाहरूमा हेर्ने भनिएको छ । यस विश्वासका कारण यस दिनलाई नारका चतुर्दशी पनि भनिन्छ ।
तेस्रो दिन गाईतिहार र लक्ष्मी पूजा छ । यस दिन गाईलाई बिहान प्रार्थना र खाना दिइन्छ । त्यस्तै, साँझमा देवी लक्ष्मीलाई प्रार्थना र पूजा गरिन्छ । तेस्रो दिन बिहान गाई तिहार (गाईको पूजा) हो । हिन्दू धर्ममा गाई समृद्धि र धनको प्रतीकको रुपमा मानिन्छ । प्राचीन समयमा गाई धेरै उपयोगी थिए । उनीहरूको दुध, गोबर लगायतका अन्य काममा लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसकारण, यस दिन मानिस गाईका पूजा गर्दछन् । घर सफा गर्ने र सजाउने काम पनि गरिन्छ । ढोका एवं झ्यालहरूमा सयपत्री र मखमली फूलहरूले बनेका मालाले सजाइन्छ । बेलुका लक्ष्मीलाई धनको देवीको पूजा गरिन्छ । उनको ढोकाका चौका र झ्यालमा तेलबत्ती (दीयो) वा मैनबत्ती बालेर पूजा गरिन्छ ।
यो विश्वास गरिन्छ कि यस दिन लक्ष्मी आफ्ना अनुयायीहरूलाई भेट्न आउँछिन् र उनीहरूलाई आशिष दिन्छन् । राति केटाकेटीहरू भइलो खेल्न मनपराउँछन् । तिनीहरू सांगीतिक वाद्ययन्त्रका साथ धेरै घरमा जान्छन् । उनीहरू घरबाट दक्षिणाको रूपमा पैसा संकलन गर्दछन् र आफैंमा मिलाएर बाँड्छन् या कुनै सामूहिक काममा लगाउँछन् ।
चौथो दिनमा तीन किसिमका पूजा हुन्छन् । मुख्यतया गोरूको पूजा यस दिनमा विभिन्न खाद्यपदार्थहरू दिएर गरिन्छ । यो गोरूतिहार वा गोरूपूजा (गोरुहरूको पूजा) को रूपमा मनाइन्छ । वैष्णव धर्म अनुसरण गर्ने मानिसले गोवर्धन पूजा गर्छन् । गोवर्धन पूजा गोवरको पहाडजस्तो ढिस्को बनाएर गरिन्छ । गोबरलाई पहाडको प्रतिनिधिको रूपमा लिइन्छ र पूजा गरिन्छ । अर्को पूजा भनेको म्हःपूजा (स्वयंको पूजा) हो । यो रातको समयमा नेवार समुदायका मानिसले गर्दछन् । यस दिन नयाँ नेपाल संवत क्यालेन्डर वर्षको सुरूवात् दिन पनि हो ।
तिहारको पाँचौं र अन्तिम दिनलाई भाइटीका भनिन्छ । यस दिन दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइको निधारमा ‘तिलक’ वा ‘टीका’ लगाउँदछन् । यो उनीहरूका दाजुभाइको दीर्घजीवन सुनिश्चित गर्न र उनीहरूले प्रदान गरेको सुरक्षाको लागि धन्यवादका लागि गरिन्छ । त्यसैले हामी ‘तिहार’ को पाँचौ दिनलाई ‘यमपञ्चक’ भन्छौं यमराजको पाँच दिनको अर्थ यमराजले मृत्युपछि हाम्रो दुर्गुण र सद्गुणहरूको न्याय गर्र्नेछन् यसैले यमराजलाई खुसी राख्न हामी यथासक्दो प्रयास गर्छौं ।
(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा प्राध्यापनरत् छन् ।)